Embroidery yeComputer yeVAKOMBANI → Wholesale • Mugadziri • P&M muparidzi
Nei zvakakodzera kushanda nesu?
Isu tiri kambani inoshandira mukutengesa nekuparadzira kushambadzira uye zvipfeko zvebasa. Isu tinopa kuisa kwete chete zvipfeko, asiwo machira anoshandisa nzira kombasi yemakomputa uye kudhinda kwemuchira
Nyoresa kambani yako nhasi uye gamuchira inodhura dhisikaundi! >>
Vashandi vedu vanokwanisa vane makore mazhinji eruzivo vanofara kubatsira uye kuraira mukugadzirwa uye kusarudzwa kwemaitiro akanakisisa ekumaka. Tine ruzivo rwakakura mukusona, kucheka nekugadzira masimendi ekushambadzira uye mhando dzakakurumbira.
Kubva 2003, isu tanga tichipa sewing, kucheka, ironing uye kunyora mazita. Tine imba yedu yekusonesa uye paki yemuchina yekushongedza. Tine hupamhi hwakakura - zvinopfuura zviuru zvitanhatu zvezvigadzirwa, mbatya dzebasa uye zvekushambadzira kubva kune vagadziri vanozivikanwa pamitengo inoyevedza. Iwe unogona kutenga zvese zvekupfeka uye zvekunyorera masevhisi (ndapota taura nesu pamberi pechinangwa chemunhu) pawebhusaiti yedu www.pm.com.pl kana muchitoro chedu paAllegro "PRODUCER-BHP".
Imba yedu yekusona inova nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvatinogadzira zvakagadzirwa neyemhando yepamusoro machira ane zvakanaka zvinoshanda zvinoshanda uye yakanyanya kufaya dhayeti uye kupedzisa matekinoroji. Isu tinokwanisa kusangana nemakontrakta anonyanya kudiwa kuburikidza nekushandisa zvinobudirira kwemidziyo iripo isu.
Isu tinochinjika - isu tinokasira kuita kune zvinodiwa nevatengi - zvese mukugadzira uye zvine chekuita nenyaya Isu tinopa sevhisi yekushongedza uye yekudhinda echidzitiro zvese pane zvigadzirwa zvakatengwa muchitoro chedu uye zvinounzwa nemutengi. Pamusoro pezvo, nekunyoresa pawebhusaiti yedu, kana uchiita kutenga, unogona kuwana imwe dudziro kubva pane yechipiri odha.
Isu tinouya kune yega yega kurongeka, tichitarisa maitirwo azvo pamatanho ese. Isu tinovaka kuvimbika kwedu pakukurukurirana pachena nevatengi uye nyanzvi yekutarisira kwakachengeteka.
Mucheka wemakomputa - mukurumbira wakasarudzika
Kugadzirwa kwemhando dzakasiyana dzezvipfeko - kusanganisira zvipfeko zvehunyanzvi - chinongova chikamu cheatinopihwa. Sechikamu chekubatana, vatengi vedu vanogashirawo mukana wekushandisa mamwe mabasa mazhinji. Isu tinoshandawo zvine simba seye embroidery semusangano, icho chimwe chezvikonzero zvedu zvikuru zvekuzvikudza.
Computer embroidery ndiyo yakanakisa mhando, yakajeka uye yakasimba nzira yekuraina zvipfeko. Tichishandisa zvivakwa zvehunyanzvi zvehunyanzvi, isu tinokwanisa kugadzira chero ipi, kunyangwe yakanyatsojeka nzira yehukuru chero pane zvipfeko zvehukuru chero hupi. Isu tinogadzira embroidery kunyorera pane akawanda mhando dzezvipfeko (polo shira, T-shirts, zvipfeko zvebasa, apuroni, matai, mashanga). Hatigumiswe nerudzi rwezvipfeko chero - fekitori yedu ine nyanzvi yekusona uye yekucheka kamuri, saka isu tine zvakakwana zvekudzora pamusoro pehunhu hwezvatinokugadzirira iwe. Iko mukana unopihwa nekombiyuta embroidery semusangano ndeye mukana mukuru wekambani inoshanda iyo yePoland musika wekushambadzira uye kushambadzira.
Ivo vakavimba nesu, pakati pevamwe:
- 1 maminitsi Jacobs
- Stock mukurumbira
nezvimwe zvakawanda. Zvizhinji kuti uone mune edu shopu. Mapurojekiti edu apfuura anoratidza kuti kunyangwe muprojekiti iyi, tinokwanisa kuita mauda zvakavimbika uye nenguva.
Screen yekudhinda - kushambadzira chiratidzo
Ndiyo imwe yemhando dzakasarudzika yakasarudzika yekumaka, iyo yatiri kugona kupa. Iyi sevhisi haina kungogadzikika chete uye inopa hunhu hwakanakisa, asiwo zvinonyatsoratidza pendi yemhando yega yega grafiki dhizaini. Nekuda kwehunyanzvi hwayo hwekutanga uye nekunyatsoita, isu tinokwanisa kupa vatengi vedu kunaka kwemhando yepamusoro, zvese kana zvasvika kune zvipfeko ivo pachavo, pamwe neiyo logo yakavezwa pavari, yakanyorwa yakanyorwa kana magirafu. Nekuda kwekuenderana kwemasevhisi edu, isu tine simba pamusoro peiwo maitiro ese ekugadzira chirongwa chakapera.
Kukurumidza kuburitsa ndicho chinangwa chedu
Isu tinosvitsa mirairo kune vatengi muPoland yese, pamwe nekune dzimwe nyika. Isu tinotumira zvinhu kunyanya kuburikidza neDPD courier. Kwemirairo yakakura, pachikumbiro chemutengi, tinoronga zvekufambisa kuenda kuimba yekuchengetera. Isu tinokwanisa kushandira pamwe nekurayira kwese pamitengo inoyevedza kwazvo. Kune zvakare mukana wekuunganidza wega padzimbahwe redu muRawa Mazowiecka.